पुरुषले किन पूरा गर्न सक्दैन् महिलाको यौनइच्छा ? « aamsanchar.com , aamsanchar
पुरुषले किन पूरा गर्न सक्दैन् महिलाको यौनइच्छा ?
आफूमा भएको यौन क्षमताअनुसार प्रत्येक पुरुषले आफ्नो महिला साथीको इच्छा पूरा गर्ने प्रयास गर्छन् । तर पनि महिलाले चाँहेअनुसार सन्तुष्टि दिन सक्दैनन् । अर्थात महिलाले आफूले चाँहेको सन्तुष्टि पमउन सक्दैनन् । जसमा पुरुषको यौन क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ ।
किन पूरा गर्न सक्दैन् पुरुषले ? यस्ता छन् कारण :
जो पुरुष सम्भोगका दौरान सही तरिकाले यौन क्रिया गर्न सक्दैंनन् या शिघ्रपतन हुन्छ, यो नपुसंकताको लक्षण हुन सक्छ । नपुसंकता भएका पुरुषको लिंगमा कठोरता आउँदैंन, आएपनि लिंग चाँडै लुलो हुन्छ । सम्भोगका दौरान अचानक लिंगका कठोरतामा कमी आउनु पनि यसको लक्षण हो ।
नपुसंकताको सिधा संबन्ध ज्ञानेन्द्रियसंग हुन्छ । मानिसले संकोचबश या जागरुकताको अभावमा यसबारेमा केही थाहा पाएका हुदैंनन ।
नपुसंकता धेरै उमेर भएका व्यक्तिमा पाइन्छ, जसबाट महिलानजिक जान पनि उनीहरुलाई डर लाग्न सक्छ । बढ्दो उमेरसंगै यौन इच्छा पनि कम हुँदैं जान्छ ।
जो पुरुष यौन क्रियामा रुची राख्दैन र जसमा उत्तेजना हुँदैंन, उ पूर्ण रुपमा नपुंसक हुन सक्छ ।
नपुंसकताका कारण पुरुषको लिंग सामान्यभन्दा छोटो हुन्छ, जसबाट पुरुष सही तरिकाले सम्भोग गर्न असमर्थ हुन्छ ।नपुंसकता पीडित व्यक्तिमा आत्मविश्वासको कमी हुन्छ यस्ता मानिस अक्सर भीडमा हड्बडाउछन्, महिलासंग कुरा गर्न पनि मन पराउदैंनन् ।
नपुसंक व्यक्तिमा रोगप्रतिरोधी क्षमता कम हुन्छ, जसका कारण मानिस पटकपटक बिरामी परिररहन्छ । बाँझोपनाका कारण प्रजनन अंग कमजोर हुन्छ ।
फास्टफुडको बढी प्रयोग र खानपानमा पोषक तत्वको कमी पनि यसको प्रमुख कारण हो ।-पूर्वेली न्यूजबाट
लिपस्टिकबारे रोचक तथ्य
अनमोल केसीले फिल्म नखेल्ने भए
हिमांश कोहलीसँगको ब्रेकअपका कारण गायिका नेहा कक्कड डिप्रेसनमा
निदि माविमा आँखा परीक्षण शिबिर
बिर्तामोडलाई बन्दमुक्त गर्न पहल थालियो
पत्रकारले निर्वाध रुपमा सूचना सम्प्रेषण गर्न पाउनुपर्ने
एकैदिन ११ वटा जोनडियर ट्याक्टर बिक्रि
भारतबाट ल्याउदै गरेको कुखुरा समाते हल्दिवारीका कुखुरा कृषकले
सम्पादन समूह :विनोद पाण्डे(कमल)
© 2016 aamsanchar.com